Maitiro ekuisa tvOS 10 beta usingaibatanidze neMac | IPhone nhau
Muvhuro wapfuura, Apple yakaratidza iwo mana masystem anoshanda ayo anosvika mumwedzi ingangoita mitatu: iOS 10, macOS Sierra, watchOS 3 uye, chii chinyorwa ichi, tvOS 10. Iyo nyowani vhezheni yeanoshanda system yeiyo yakatarwa yepamusoro bhokisi reApple. ichauya nenhau dzinonakidza, senge Siri inokwanisa iyo iwe yaunogona kutsvaga paYouTube kana iyo Rima Mode iyo yaunoona pamusoro pemitsara iyi. Kana iwe uri vagadziri uye uchida kuzviedza, mune ino chinyorwa isu ticha tsanangura maitiro ekuisa tvOS 10 beta pasina kubatanidza Apple TV kune Mac.
Kusvika parizvino, kuyedza tvOS betas raive risiri basa rakareruka pasirese kunyangwe seyekuvandudza. Kazhinji zvakafanira kubatanidza Apple TV kune Mac, asi awana nzira yekuzviita iyo yauchazongoda iyo iPhone ne Remote uye Dropbox kunyorera uye uine imwe Apple Nhoroondo accountndiko kuti, mugadziri (iyo yemahara account haina kukosha). Iwe wakatsanangura iyo yose maitiro pazasi.
Maitiro ekuisa tvOS 10 beta
Ngatiendei kune iyo peji re Apple Developer, Isu tinodhawunirodha iyo mbiri uye tinoichengeta muDropbox.
PaApple TV, ngatiitei Zvirongwa / General / Yakavanzika uye isu tiri pamusoro peTumira kuApple.
Pamusoro Tumira kuna Apple, tinodzvanya bhatani reKutamba.
Tinobaya Wedzera Mbiri uye tinogamuchira.
Isu tinobvisa iyo URL iyo yatinoratidzwa.
Iye zvino isu tinotora iyo iPhone, yakavhurika Dropbox uye enda kune iyo folda iyo ine iyo yekumisikidza chimiro.
Isu tinobaya pane bhatani riri padhuze neiyo yekumisikidza profiles, wozotumira paLink Link uyezve paKopa chinongedzo mune yekugovana pepa.
Isu tinovhura Remote application, sarudza iyo keyboard uye unama URL yatakateedzera mudanho rekutanga.
Isu tinoshandura iyo 0 kumagumo kweiyo URL kuita 1 uye tinya Enter Enter.
Iyo Apple TV ichatikumbira isu kuti titangezve. Isu tinotangazve.
Pakupedzisira, ticha Zvirongwa / Sisitimu / Software Kwidziridzo uye isu takaisa iyo iOS 10 beta vhezheni.
Kutevera nhanho zvakanaka hakufanirwe kunge kuri dambudziko. Hongu, senguva dzose, taura izvozvo hatikurudzire kuisa software muchikamu chekuyedza Zvematambudziko atingave tiri kusangana nawo, uye zvishoma pane chishandiso chatisingakwanise kudzora zvakanyanya se iPhone. Kana iwe ukafunga kuisa iyo, usazeze kusiya yako ruzivo mune zvakataurwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Maitiro ekuisa tvOS 10 beta usingaibatanidze neMac
Pane chero nzira yekuvandudza apple tv 3 kune tv os?
M. Walnut akadaro
Zvakanaka, Facebook inozvivhara uye Twitter kana iwe ukapa ziviso haiende kwazviri, zvinongoenda kuTwitter, kufamba kunokundikana zvakakwana maLinks.
Pindura kuna M. Nuez
Mhoroi apo! Uye hapana nzira yekumisikidza isina iyo yekuvandudza account uye kana iwe uine Mac? Ndatenda.
Mhoro Jose. Iyo tvOS betas ndiyo yakaoma kushandisa. Iwe unozoda mushambadzi kuti akutumire purogiramu kana kuiisa pane yako Apple TV.
Ndatenda zvikuru Juanma. Zvakanaka nevamwe vako vakaita sewe !!!
Vanhu vakaiisa pasina matambudziko? ndinoziva
Ini ndinoramba ndichiwedzera chimiro uye handimbotangazve ...
Alejandro Redondo Escrich akadaro
Hi, chaizvo zvakafanana chinhu chinoitika kwandiri. Iyo inogara nekusingaperi "ichiwedzera chimiro." Pandinodzvanya pamenyu mushure mekufinhwa, zvinoita sekunge chimiro chakaiswa nemazvo, ndinotangazve ndega uye ndinotsvaga zvekuvandudzwa uye musimboti zvinoita kunge zviri kufamba zvakanaka, beta inoonekwa uye ndinotora (zvinotora 2 -3 maawa, zvinotyisa). Dambudziko nderekuti painopedza inokubvunza kana iwe uchida kuisa uye warova Ok, uye kamwe-kamwe inosvetuka nekukuudza zvakare kuti pane vhezheni yekuisa uye inotanga kurodha pasi zvakare… ;-(… Unozviziva here izvozvo Unoziva here kuti nei zvichitora nguva yakareba kudhanilodha?
Pindura kuna Alejandro Redondo Escrich